Taladoon Show waa barnaamuj todobaadle ah, oo hadba lagu xogwaraysto musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka Golaha Wakiiladda iyo Golayaasha Deegaanka. - Haldoornews
Marwo Sucaad Yuusuf Odowaa (Sucaad Carmiye), waa haweenay ka mid ah aqoonyahanka Somaliland. Waa musharrax u tartamaysa Golaha Wakiiladda. Kana sharaxan Gobolka Saaxil. Halkan ka daawo waraysi xiise leh, oo barnaamujka Taladoon uu la yeeshay. Waxa barnaamujka daadihinaya Khadar Mariano.
Talk Taladoon Show halka Riix Faahfaahin kale